Dyara Leaf Direct PCR Kit - UNG Vatengesi uye Fekitori | China Dyara Leaf Yakananga PCR Kit - UNG Vagadziri
Tidaidzei: + 86-28-86050301
Tidaidzei: + 86-13880676215
SARS-CoV-2 Nucleic Acid Yekutsvaga Kit
SARS-CoV-2 IgM / IgG Kwayedza Kit (Colloidal Goridhe)
SARS-CoV-2 Antigen Bvunzo (Colloidal Goridhe)
Virus Kutakura Pakati Pakati Tube
RNA & DNA kucheneswa
Viral RNA Isolate Kit
Utachiona DNA & RNA Isolate Kit
Cell Yese RNA Isolate Kit
Mhuka Yese RNA Isolate Kit
Dyara Yese RNA Isolate Kit
Dyara Yese RNA Isolate Kit Uyezve
Mhuka Tissue DNA Isolate kit
Ropa DNA Mini Kit
Dyara DNA Isolate Kit
RT Heroᵀᴹ I (Master Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis)
RT Heroᵀᴹ II (Master Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis yeiyo Chaiyo Nguva PCR)
RT Heroᵀᴹ II (Master Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis yeiyo Chaiyo Nguva PCR ine gDNase)
PCR Heroᵀᴹ (Iine Dhayi)
Nguva Yechokwadi PCR Nyore SYBR Green Ini
Nguva Yechokwadi PCR Nyore Taqman
RT Easyᵀᴹ II (ine gDNase) Master Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis yeiyo Real Nguva PCR ine gDNase
Lnc-RT Heroᵀᴹ I (ine gDNase) (Super Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis kubva kuIncRNA)
QuickEasyᵀᴹ Cell Direct RT - qPCR Kit - SYBR Green Ini Ye cell yakananga RT - qPCR uchishandisa 10 - 1,000,000 maseru
Mhuka Tissue Yakananga PCR Kit
Mhuka Tissue Yakananga PCR Kit-UNG
Mouse Muswe Wakananga Wakananga PCR Kit
Mouse Muswe Wakananga PCR Kit
Mouse Muswe Wakananga PCR Kit - UNG
Zebra Hove Yakananga PCR Kit
Mbizi Hove Yakananga PCR Kit - UNG
Dyara Shizha Rakananga PCR Kit
Dyara Shizha Rakananga PCR Kit - UNG
Dyara Leaf Direct PCR Uyezve Kit
Dyara Shizha Rakananga PCR Uyezve KIT - UNG
Dyara Mbeu Yakananga PCR Kit I
Cell Yakananga RT-qPCR Kit
2019-nCOV Nucleic acid yekuona kit (multiplex PCR fluorescent probe nzira)
SARS-CoV-2 Antigen Bvunzo Kit (Colloidal Goridhe)
Kero: D2, block A, Tri-medical innovation centre, No. 18, North Bayi Road, Yongning Street, 611130, Chengdu, China
Runhare: + 86-28-86050301
Mhomho / Whatsapp / Wechat: + 86-13880676215
Wepamusoro Giredhi China Nucleic Acid Kubvisa Sisitimu, Yakazara otomatiki Nucleic Acid Kuchenesa Kuchekesa Machine, 32 & 96 Type CE
Iyi kit inoshandisa yakasarudzika lysis buffer system iyo inogona kukurumidza kuburitsa RNA kubva kune yakakwenenzverwa maseru sampuli yeRT-qPCR maitiro, nokudaro ichibvisa iyo inopedza nguva uye inorema RNA yekuchenesa maitiro. Iyo RNA template inogona kuwanikwa mumaminetsi manomwe chete. Iyo 5 × Direct RT Sanganisa uye 2 × Yakananga qPCR Sanganisa-SYBR reagents yakapihwa nekiti inogona kukurumidza uye kunyatso kuwana chaiyo-nguva yakawanda huwandu hwePCR mhedzisiro.
5 × Direct RT Sanganisa uye 2 × Yakananga qPCR Sanganisa-SYBR ine yakasimba inhibitor shiviriro, uye lysate yemasampuli inogona kushandiswa se template yeRT-qPCR zvakananga. Iyi kit ine yakasarudzika RNA yakakwira-kuyananisa Foregene reverse transcriptase, uye Hot D-Taq DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, reaction buffer, PCR optimizer uye stabilizer.
Yakakura Sarudzo yeChina Chaiyo Nguva Fluorescence Virus Nucleic Acid PCR Bvunzo
Kubva paPlant Leaf Direct PCR kit, dUTP inoshandiswa panzvimbo yeDTTP, uye iyo enzyme yeUNG inogona kudzikisira template ine DUTP inowedzerwa. Nenzira iyi, iko kusarongeka uye kurongeka kwekusimudzira kunovimbiswa, uye dambudziko rekusvibiswa kwechigadzirwa chePCR chinogona kuitika panguva yekuyedzwa kwemageneti kwakadzivirirwa.
Yakachipa fekitori China Nucleic Acid Yekutsvaga Kit PCR Virus Nucleic Acid Kucherwa Kit
Ichi chigadzirwa chinotora yakasarudzika DNA-chete yekuchenesa mbichana tekinoroji uye inoshanda SDS lysis fomula, iyo inogona kuwana yepamusoro-plasmid DNA kubva kubhakitiriya mukati memaminitsi makumi maviri.
OEM China China Yakakwira Sensitivity Nucleic Acid Kuonekwa Kwayedza Kits PCR Machine
Iyo kit inoshandisa iyo spin ikholamu uye fomula yakagadzirwa na Foregene, iyo inogona kunyatsobvisa yakachena-uye yakakwira mhando hutachiona hweDNA neRNA kubva kumasampuli akadai seplasma, serum, isina-isina muviri fluid, uye cell tsika supernatant. Iyo kit inonyatso kuwedzera Linear Acrylamide, iyo inogona nyore kutora mashoma madiki eDNA neRNA kubva kumasampuli. DNA / RNA-Chete Column inogona kunyatso kusunga DNA neRNA. Iyo kit inogona kugadzirisa nhamba hombe yemasampuli panguva imwe chete.
Iyo kitu yese haina RNase, saka iyo yakanatswa RNA haizoshoreke. Buffer RW1 uye Buffer RW2 inogona kuve nechokwadi chekuti yakawana hutachiona nucleic acid isina mapuroteni, nuclease kana zvimwe zvisina kuchena, izvo zvinogona kushandiswa zvakanangana nekudzika kwenzizi kwema molecular biology kuyedza.
Wholesale OEM China Runmei 2021 Nyowani Kusvika PCR Kurapa Kwayedza Nucleic Acid Kuona Laborator
Iyo kit inoshandisa iyo spin ikholamu uye fomula yakagadzirwa na Foregene, iyo inogona kunyatsobvisa yakachena-uye yakakwira mhando hutachiona hweRNA kubva kumasampuli akadai seplasma, serum, isina-sero muviri fluid, uye cell tsika supernatant. Iyo kit inonyatso kuwedzera Linear Acrylamide, iyo inogona nyore kutora mashoma madiki eRNA kubva kune iwo masampuli. RNA-Chete Column inogona kunyatso kusunga RNA. Iyo kit inogona kugadzirisa nhamba hombe yemasampuli panguva imwe chete.
Iyo kitu yese haina RNase, saka iyo yakanatswa RNA haizoshoreke. Buffer viRW1 uye Buffer viRW2 inogona kuve nechokwadi chekuti yakawanikwa hutachiona nucleic acid isina mapuroteni, nuclease kana zvimwe zvisina kuchena, izvo zvinogona kushandiswa zvakanangana nekudzika kwenzizi kwema molecular biology kuyedza.
Quots yeChina Yakazara Yega Reagents Inotora Nucleic Acid (Generotex)
Kunamatira kune chirevo che "Super Yakakwira-mhando, Inogutsa sevhisi", Isu tanga tichivavarira kuve wakanaka bhizimusi mudiwa wako weQuots yeChina Yakazara Automatic Rea ...
Mutengo unonzwisisika weChina Chaiyo Nguva Fluorescence Virus Nucleic Acid PCR Bvunzo
Iyi kit inoshandisa Real-nguva RT PCR tekinoroji (rRT-PCR) yekuona kwakaringana kweSARS-CoV-2 (ORF1ab geni uye N gene) nucleic acids muvanhu nasopharyngeal kana oropharyngeal swab sampuli, nema multiplex PCR fluorescent probe nzira. kutonga kwemukati kuongorora mhando yemhando yepamusoro, nekudaro hapana chikonzero chekucheneswa kweaconic, inogona kupedzisa bvunzo muawa rimwe chete, kunyanya inokodzera kuona kukurumidza.
Tsananguro yepamusoro China Nucleic Acid Kucheneswa Kucherwa Yc-701 Cov Nucleic Acid
Iyi kit inoshandisa yakasarudzika lysis buffer system kukurumidza kuburitsa genomic DNA kubva kumhuka dzemuviri masampuli ekushanduka kwePCR, saka inonyanya kukodzera kuyerwa kukuru kwemajini.
Maitiro ekuburitsa genomic DNA kubva kune lysis buffer inopedzwa mukati memaminitsi 10-30 pa65°C. Hapana mamwe maitiro senge mapuroteni uye RNA kubviswa anodikanwa, uye iyo yakasunungurwa trace DNA inogona kushandiswa se template yePCR reaction.
2×PCR NyoreTM Sanganisa (UNG) inoshandisa dUTP pachinzvimbo cheDTTP pahwaro hwe2×PCR NyoreTM Sanganisa, uye unowedzera UNG enzyme (Uracil-N-glycosylase) iyo inogona kudzikisira template ine DUTP panguva imwe chete. Pamberi pePCR kuita, iyo enzyme yeUNG inoshandiswa kudzikisira iyo PCR chigadzirwa chine uracil. Iyo enzyme yeUNG haizove nechero mhedzisiro patemplate iyo isina uracil, nekudaro ichivimbisa huchokwadi uye kurongeka kwekusimudzira nekudzivirira mukana wePCR zvigadzirwa zvinosvibisa panguva yakakura yekuyera kwemajini.
D-Taq DNA polymerase iDNA polymerase inonyanya kugadzirwa naForegene kune yakananga PCR maitiro. D-Taq DNA polymerase ine kushivirira kwakasimba kune dzakasiyana siyana dzePCR reaction inhibitors, uye inogona kunyatsoita huwandu hweDNA mune akasiyana maitiro ekugadzirisa masisitimu, uye iyo yekumhanyisa yekumhanyisa inogona kusvika 2Kb / min, iyo inonyanya kukodzera Direct PCR kuita.
Wepamusoro Giredhi China Virus Nucleic Acid Kucherwa Kit, Nucleic Acid Kwayedza Bhokisi, Nucleic Acid
Iyo 2X Chaiyo PCR NyoreTM Sanganisa-SYBR yakapihwa neiyo Chaiyo Nguva PCR NyoreTM-SYBR Green I kit ndeye nyowani premix system iyo inoshandisa SYBR Green Ini yeNguva Yechokwadi PCR yekukwirisa maitiro, ayo anogona kwazvo kuvandudza chigadzirwa chaicho uye kugadzirisa kwekunzwa. ROX inopihwa senge yekudzora dhayi mukati. Iyo fluorescence kusimba kweichi kit is 3-5 nguva iyo yezvigadzirwa zvakafanana, izvo zvinogona kuve zvinonzwisisika uye intuitively kuratidza iko kukosheswa kwetatu template template.
2X Real PCR NyoreTM Sanganisa-SYBR ine Foregene yakasarudzika inopisa-kutanga Taq DNA Polymerase. Inofananidzwa neyakajairika Taq enzyme, ine zvayakanakira yepamusorosoro kukwidziridzwa kugona, yakasimba yakananga yekuwedzera kugona uye yakaderera mismatch chiyero Inogona kudzora isiri-yakatarwa kukwidziridzwa uye nekuvandudza kunyatso kwePCR.
Iyi kit inoshandisa DNA-chete ikholamu inogona kunyatso kusunga DNA, Foregene protease uye yakasarudzika buffer system, iyo inorerutsa zvikuru kucheneswa kwemuti genomic DNA. Yakakwira-mhando genomic DNA inogona kuwanikwa mukati memaminitsi makumi matatu, iyo inodzivirira kudzikisira kwe genomic DNA.
Iyo DNA-chete silica gel membrane inoshandiswa mupini yekoramu ndeye Foregene yakasarudzika nyowani zvinhu, iyo inogona kunyatsoita uye yakananga kusunga kuDNA, uye nekuwedzera kubviswa kweRNA, mapuroteni asina kuchena, ions, polysaccharides, polyphenols uye mamwe ma organic makomputa.
Fekitori yakanangana China Nucleic Acid Rapid PCR Bvunzo Virus Kutarisa Chishandiso Kumba
Iyi kit inoshandisa yakasarudzika lysis buffer sisitimu yekukurumidza kuburitsa genomic DNA kubva kumakonzo miswe, nzeve, mhasuru uye mamwe matissue sampuli ekuchinja kwePCR, saka inonyanya kukodzera kuyerwa kukuru kwemajini.
Maitiro ekuburitsa genomic DNA kubva kune lysis buffer inopedzwa mukati memaminitsi 10-30 pa65 ° C. Hapana mamwe maitiro akadai seprotein uye RNA kubviswa anodikanwa, uye iyo yakaburitswa trace DNA inogona kushandiswa se template yePCR reaction.
2 × M1-PCR Easy TM Sanganisa ine kushivirira kwakasimba kune PCR reaction inhibitors, uye inogona kushandisa lysate yemuenzaniso kuti iongororwe setemplate yekubudirira uye yakanangana nekusimudzira. Iyi reagent ine Foregene D-Taq DNAPolymerase, dNTPs, MgCl2, reaction buffer, PCR optimizer uye stabilizer.
China Nyowani Chigadzirwa China Prueba De Saliva Igg Igm Saliva Rapid Test, Saliva Yakavakirwa Kuberekera Bvunzo, Noninvasive Rna Virus Saliva Collection Kit
Iyi kit inoshandisa spin kholamu uye fomula yakagadzirwa na Foregene, iyo inogona kunyatsobvisa yakachena-uye yepamusoro-soro yakazara RNA kubva kumaseru akagadzirwa mu96, 24, 12, uye 6-tsime mahwendefa. Iyo kit inopa inopa inoshanda DNA-Kuchenesa Column, iyo inogona nyore kupatsanura iyo inoshamisa uye sero lysate, kusunga uye kubvisa genomic DNA. Iko kuvhiya kuri nyore uye kunoponesa nguva; iyo RNA-chete Column inogona kunyatso kusunga RNA ine yakasarudzika fomula. Nhamba huru yemasampuli inogona kugadziriswa panguva imwe chete.
Iyo sisitimu yese ndeyeRNase-Yemahara, kuitira kuti iyo yakanatswa RNA isashoreke; iyo Buffer RW1, Buffer RW2 buffer yekuwachisa system guaratee iyo yakawanikwa RNA isina mapuroteni, DNA, ion, uye organic organic yakasvibisa.
Kero: D2, block A, Tri-yekurapa hunyanzvi nzvimbo,
Kwete 18, North Bayi Road, Yongning Street,
Nhare: + 86-28-86050301